IVF सम्बन्धि फैलिएका केहि गलत धारणाहरु | Vatsalya Natural IVF
IVF अर्थात् Invitro Fertilization (जसमा मानव शरीर भन्दा बाहिर निषेचन गराइन्छ) एक आधुनिक उपचार विधि हो जसमा विभिन्न कारणले डिम्ब र शुक्रकिटको मेल हुन नपाउँदा उत्पन्न हुने गर्भधारण सम्बन्धि समस्याको निराकरण गरिन्छ । धेरै मानिसहरु यसलाई Test Tube Baby को रुपमा पनि बुझ्छन् ।
आजको समयमा उपचार र सूचना प्रविधिमा आम मानिसको पहुँच बढेको हुँदा, धेरै मानिसहरुले यसबारे सुनेका/पढेका छन् तर राम्ररी नबुझेका कारण यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन्।
IVF आखिरमा के हो र यो कस्तो व्यक्तिको लागि यो आवश्यक छ? डा. स्वाती कुमारी पाण्डेले यस भिडियो मार्फत् स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
IVF का बारेमा फैलिएका केहि भ्रमहरु
१) IVF धेरै को बुझाईमा धनी व्यक्तिहरुका लागि मात्र उपयुक्त छ । IVF का सफलता निर्भर हुने पाटो (खानपान, जीवनशैली, उमेर, तौल, आदि) मा ध्यान दिए पहिलो प्रयासमै गर्भधारण हुने सम्भावना बढाउन सकिन्छ र कम खर्च मै IVF को लाभ लिन सकिन्छ।
२) IVF पीडादायक प्रक्रिया हो त्यसैले यसलाई अन्तिम उपायको रुपमा राख्नुपर्छ भन्ने धेरै मानिस सोच्छन् । यदि सुई लगाउँदा पीडा हुन्छ भने चिकित्सक सँगको सल्लाहमा यसलाई सहज पार्न सकिन्छ ।
IUI कुनै प्रकारले IVF को विकल्प होइन त्यसैले कहिले IUI गर्ने, कहिले IVF गर्ने वा कहिले केहि औषधि सेवन गरी प्राकृतिक रुपमा प्रयास गर्ने जस्ता कुरा चिकित्सकको सल्लाहमा नै निधो गर्नुपर्छ ।
३) IVF बाट जन्मिने सन्तानमा विकारहरु देखिन्छन् । यो एउटा भ्रम मात्र हो । IVF बाह्य रुपमा निषेचन गर्ने प्रक्रिया मात्र हो । बाँकी सामान्य गर्भाधारणमा हुने जसरी नै सम्पूर्ण कुरा हुन्छ। केहि अवस्थामा IVF गराउँदा बच्चा समयभन्दा छिटो जन्मिने, केहि विकार हुने देखिएपनि औशतमा प्राकृतिक रुपमा जन्मँदा हुन सक्ने विकारको तुलनामा फरक नगण्य छ ।
४) IVF बाट जन्मिएका सन्तान आफ्नो हुँदैन । IVF मा श्रीमान्-श्रीमतीकै वीर्य र डिम्बको प्रयोग गरिन्छ जसले पूर्ण रुपमा IVF सन्तान आफ्नै हुन्छ । केहि अवस्थामा दम्पतिको आवश्यकता अनुसार डिम्ब वा शुक्रकिट डोनर बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसो गर्नुपर्ने भएमा दम्पतिको पूर्ण सहमति लिइन्छ ।
IVF बारे अझै केहि प्रश्न छन् वा यस विधिबाट तपाईको गर्भधारण गर्ने सम्भावाना कति छ थाहा पाउन चाहनुहुन्छ? हामी लाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।